Dowlada Yeman iyo UNHCR oo ka wada hadlay xaalladda Qaxootiga Soomaalida. – Puntland Voice
Dowlada Yeman iyo UNHCR oo ka wada hadlay xaalladda Qaxootiga Soomaalida.
August 14, 2014 10:54 am Views: 23
Guddoomiyaha Hay’adda Qaxootiga Qaranka ee dalka Yemen, Amiir Caydaruus ayaa kulan la qaatay Yasuko Shimizu oo ah Sarkaalka Hawlgalladda ee Xafiiska Hay’adda QM ugu qaabilsan Arrimaha Qaxootiga (UNHCR) ku leeyihiin dalka Yemen.
Labada Mas’uul ayaa waxay Kulankooda ku lafa-gureen xaalladda guud ee Qaxootiga Soomaalida ee ku nool Xeryaha UNHCR ee ku yaalla dalka Yemen.
Wakaalladda Wararka ee dalka Yemen (SABA) oo aan warkan ka soo xiganay ayaa sheegtay inay labada Mas’uul ka wada hadleen Iskaashiga Hay’addahaasi iyo sidii Warbixin looga diyaarin xaallaadda Qaxootiga Soomaalida iyo kuwa Afrikaanka ee ku sugan Yemen.
Dhinaca kale, Kulanka waxaa diiradda lagu saaray abaabulka haatan socda si loo qabto Shirweyne Heer Wasiir oo looga hadlayo Qorshaha Calaamka ee Arrimaha Qaxootiga Somalia (GISR|) oo lagu wado in bishan 18-da ilaa 20-da lagu qabto caasimadda dalka Ethiopia ee Addis Abeba.